किन हुन्छ एयरपोर्टमा संधै ट्राफिक जाम ? — Motivatenews.Com
किन हुन्छ एयरपोर्टमा संधै ट्राफिक जाम ?
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार झण्डै दुई साता लामो युरोप भ्रमणमा निस्किदा भण्डै एक घण्टा त्रिभुवन विमानस्थल बन्द भयो । प्रधानमन्त्रीको सवार विमान उड्ने समयमा विमानस्थल बन्द हुँदा विदेशबाट आएका आधा दर्जन विमानले ३ देखि पाँच फन्को आकासमा लगाउन बाध्य भए ।
अवतरणका लागि आएका विमानहरु आकाशमै होल्ड भएपछि विमानमा भएका यात्रुहरुमा त्रासको भए उत्पन्न भयो । मस्कटबाट आएको ओमान एरको विमानले आकाशमै पुरा ४ चक्कर लगाउनुपर्‍यो । यसैगरी सारजहाबाट आएको एयर अरेबियाको विमानले पनि ३ चक्कर लगाएर होल्ड गर्‍यो । बैंगलोरबाट आएको नेपाल एयरलाइन्सको विमानले पनि चार चक्कर आकाशमै काटेपछि मात्रै अवतरण गर्न पायो । मेलेसियाबाट आएको मालिन्दो एयर पनि चार चक्कर लाइन्जेल आकाशै घुमिरह्यो ।
धेरै बेर आकाशमा विमान होल्ड हुँदा यात्रुहरुमा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न हुने गरेको छ । त्रास मात्र हैन कहिले कही प्राविधिक समस्याका कारण विमानमा खतर उत्पन्न भई दुर्घटना हुनसक्ने खतररा पनि हुन्छ ।
यसैपनि बेलुकीको सयममा त्रिभुवन विमानस्थलमा विमानको अत्याधिक चाप हुन्छ । यही समयममा उडान र अवतरण रोकिएपछि बेलुकी १० बजे विमानस्थल बन्द गर्न पनि समस्या पर्ने गरेको छ । यसले गर्दा धावनमार्ग मर्मतको काममा पनि असर पर्छ ।
सर्वसाधारणलाई समस्या नपर्ने गरी भीभीआईपी उडानलाई व्यवस्थित गर्न नागरिक स्तरबाट पटक–पटक माग भएपनि अझै पनि बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । विगतमा राजा महाराजाहरुको जस्तै लोकतन्त्रमा पनि यसरी महाराजा पल्टिएपछि जनता आक्रोस बढ्न थालेको छ ।